ICarPlay ka-Apple iphumelele i-85% yolwaneliseko lomsebenzisi | Ndisuka mac
Kwiintsuku ezi-5 ezidlulileyo bahambise imoto yam entsha, iToyota C-HR Hybrid. Imoto iyaqhubeka indimangalisa, kodwa njengomsebenzisi okhutheleyo weApple ndiyaphoxeka kukubona ukuba iToyota yenye yeenkampani zeemoto ezigqibe kwelokuba, okwangoku, abayifuni inkqubo yeCarPlay yeapile yokulunywa.
Ndiyazi ukuba ziingxaki zomdla phakathi kweenkampani zombini kwaye, kwixesha elizayo elingekude kakhulu, baya kunika ingalo yabo ukuze bajije kwaye basebenzise inkqubo ye-Apple yokukhangela kwiikhompyuter zabo ebhodini. Nangona kunjalo, iqela elikhulu leemveliso zeemoto ukuba sele beliphumezile okanye bakulo kwaye emva kokuqhuba isifundo kwiqela labasebenzisi abafanayo I-85% yolwaneliseko ngenkqubo sele ifunyenwe.
Ingxelo esithetha ngayo iyafumaneka Abathengi beQhinga lokuCwangcisa kuphela, kodwa umbhali ofanayo onguChris Schreiner wabelane ngeziphumo ezithile ezifanayo kwiibhloko ezithile zamanye amazwe. Iipesenti ezingama-31 zabasebenzisi ekuye kwafunwa kubo bathi "banelisekile" yinkqubo yeCarPlay, Ngelixa iipesenti ezingama-54 zisithi "banelisekile" kuphela, nalapho inqanaba lokwoneliseka lilonke ngama-85%.
Ngoku, njengoko besesitshilo, uphononongo lwenziwe kwisampulu encinci yabanini bezithuthi ezingama-70 ngeCarPlay ethengwe phakathi kuka-2016-2017 e-United States, isampulu nangona incinci kakhulu Isinika umkhombandlela wokuba uphi umbumbulu kule ngxaki.
I-43% yabo basebenzisi bathe ikwakhona "kunokwenzeka" ukuba bancome Inkqubo yeCarPlay kwabanye, ngelixa i-37% ithe "kunokwenzeka" ukuyicebisa, utshilo iSicwangciso-buchule.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » I-Apple CarPlay ifumene ukwaneliseka komsebenzisi ngama-85%